एकाएक अलोकप्रिय किन बन्दै छन् मिश्र ? कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्नेबारे खुलेको यस्तो छ ‘रहस्य’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने भ्रमणलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् ।
नागरिक समाजका अगुवा डा सुन्दरमणि दीक्षितले मोदीको नेपाल भ्रमणले बिग्रिएको नेपाल–भारतसम्बन्धमा ठूलो सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै दीक्षितले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा देखाएको तदारुकता र सम्वादहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने बताए ।
डा दीक्षितले ओलीले नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको भन्दै केही तत्व भने सम्बन्ध विगारेर फाइदा लिन तल्लिन रहेको तर्क गरे ।
‘दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिगारेर केही तत्वले फाइदा लिन चाहन्छन् । केपी ओलीले त्यस्ता तत्वहरूको योजनालाई बिफल बनाइदिनुभएको छ,’ दीक्षितले भने ।
दीक्षितले मोदीको यो नेपाल भ्रमण विरोध गर्नेहरू युरोपियन युनियनबाट सञ्चालितहरू रहेको प्रमाण पेस गरेका छन् ।
युरोपियन युनियनले नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता र द्वन्द्व निम्ताएर फाइदा लिन सक्रिय रहेको बताउँदै रवीन्द्र मिश्र युरोपको एउटा नराम्रो मिसनरी फाउन्डेसनको डोनेसनमा चलेको समेत आरोप लगाए ।
हुन पनि केही गोप्य सूत्रहरुले (नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धानले पनि) मिश्र कोद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने कुरा उनी चुनावमा भिड्दै गर्दा पत्ता लगाएको चुहिएको थियो ।
डा दीक्षितले लगाएको आरोप यतिबेला मेला खाएको निष्कर्ष आलोचकहरुको छ ।
मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टी युरोपियन युनियनको पैसा खाएर गतिविधि गरिरहेको डा दीक्षितले दाबी गरे ।
‘ओली–मोदीको युरोपियन युनियन र क्रिश्चियनहरूले विरोध गरेका हुन्’, उनले भने, ‘डलर र पाउन्ड धेरै खाएका पार्टीहरूले विरोध गरेको हो ।’
‘विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूको धेरै व्यक्तिको शरीर यहाँ मन विदेशमा छ’, डा दीक्षितले भने, ‘हिन्दूत्व र बुद्धत्व तथा ओमकार परिवारलाई ठोक्नलाई युरोपियन युनियन आएका हुन् ।’
रविन्द्र मिश्रजीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् ?
गएको चुनावताका उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१ बाट चुनाव लडिरहँदा उनी कसबाट सञ्चालित छन् भन्नेबारे रहस्यमय भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
उनीमाथि निगरानी गरिरहेको नेपाली सुरक्षा निकायहरुको अध्ययनले तत्कालीन ‘सिभिल वार’मा फसेको युद्धग्रस्त हंगेरीमा ‘मिसनरी’ काम गरिरहेको एक डोनर संस्थामाथि आशंका गरिएको बाहिर आएको थियो ।
उक्त सन्दर्भमा गरिएको आशंका जस्तै डा दीक्षितले पनि यतिबेला मिश्रमाथि आरोप लगाएका छन् ।
एपी वान टेलिभिजनको बहसमा पनि शनिबार उनले मोदी ओली सम्बन्ध र नेपालमा सञ्चालित यरोपियन मिसनबारे मुखै खोलेर बोलेका थिए ।
डा दीक्षितले युरोपियन युनियनले नेपालमा प्रगति होइन धर्म परिवर्तन मात्रै चाहेको र धर्म निरपेक्ष भन्दै ख्रिष्टयन सापेक्ष बनाउन लागिपरेको बताए ।
युरोपको धर्म निरपेक्षता भनेको क्रिश्चियनाइज्ड मोडेल रहेको आरोप लागिरहेकै बेला मिश्रमाथि डा दीक्षितले यस्तै आशंका उब्जने ठाउँ दिएका छन् ।
उनले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व पैदा गरी तिब्बतलाई ठोक्ने योजनामा रहेको युरोपियन युनियनको पिछलग्गुहरु नेपालमा पनि अब टिक्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘यसैले यहाँ हिन्दूधर्मलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको छ,’ डा दीक्षितले भने, ‘डलर खनाएर नेपालमा भाँडभैलो मच्चाउन चाहन्छन् ।’
हिन्दूधर्ममाथि आक्रमण गरेर युरोपियन युनियनले तिब्बतलाई ठोक्न चाहेको उनले बताए । निर्वाचनमा मिश्रहरुको क्रियाकलापले विदेशीबाट सञ्चालित भएको पुष्टी भएको उनको दाबी छ रिपोर्टस नेपालमा समाचारले प्रकाशित गरेको छ ।
मिश्रले मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरी आफ्नो कुपन्डोलस्थित साझा विवेकशील पार्टीको कार्यालयमा कालो झन्डा राखेका थिए, जसलाई प्रहरीले हटाएको थियो ।